SHUMACYADA KABAHA CASRIGA - SHARAXAADDA KALA DUWAN, BEERASHADA. SAWIR - BEER CAGAARAN
Lovers of yaanyada Rose kacay hubaal ah kala duwan ee rajo cusub ee Shumacyada Scarlet.
Miraha qaabka cilindrical quruxda badani waxay ku kala duwan yihiin juiciness iyo dhadhan macaan oo macaan, iyo dhalidu waxay ka fili doontaa xitaa bannaanka u khibrad leh.
Maqaalkani waxaad ka heli doontaa sharaxaad buuxda ee noocyada kala duwan, si aad u ogaato astaamaha, wax ka barto sifooyinka beeraha iyo iska caabinta cudurada.
Shumacyada Mucjiso: Sharraxaadda kala duwan
Magaca dugsiga Shumacyada shumaca
Sharaxaad guud Xilliga bartamihii xilli aan kala go 'lahayn kala duwanaanta miraha
Foomka Miraha waa cylindrical, elongated
Cunto dhexdhexaad ah 60-100 garaam
Noocyo dhaadheer ilaa 12 kg halkii mitir labajibbaaran
Shumacyada Tujanaada Tumada - bartamihii bartamah wuxuu u kordhay kala duwanaanta miro leh dhalid wanaagsan. Maqnaanshaha baadiyaha, dheer, ku talinaynaa formation of 2-3 caleen. Tirada qiyaasta cagaaran waa mid dhexdhexaad ah.
Miraha waxaa lagu ururiyaa burushyada 3-4 gogo '. Wax-soo-saarka ayaa fiican, qiyaastii 12 kg laga bilaabo 1 jibbaaran. m ka yar filimka. Tamaandho waxay u bislaadaan inta lagu jiro xilliga xagaaga. Miraha ayaa la jaraa, cylindrical, oo leh calaamad yar oo fiiqan. Maqaarku ma aha mid qaro weyn, laakiin cufan, si fiican looga hortago tamaandhada.
Habka koriinka, midabka ayaa ka beddelaya cagaaran iftiin leh ilaa casaan. Dhadhanka waa mid aad u fiican, hodan iyo macaan.. Waxyaabaha sarreeya ee sonkorta iyo walxaha raadraaca waxay ka dhigtaa yaanyada ku haboon ilmaha iyo cuntada cuntada.
Shumacyada shumaca ilaa 12 kg halkii mitir labajibbaaran
Akhri boggayaga oo dhan oo ku saabsan cudurada yaanyada ee lagu koriyo iyo sida loola macaamilo.
Iyo sidoo kale ku saabsan noocyo of sare-dhalid iyo cudur-u adkaysta, oo ku saabsan yaanyada oo aan ku socon walaaca dambe.
Darajada xulashada Ruushka, waxaa loogu talagalay loogu tala-galay koriyo iyo hoyga filimada. Gobolada diirran, waa suurtogal in la koro dhul furan, laakiin dhalmada ayaa yarayn karta. Miraha waa la keydiyaa, gaadiidka waa suurtogal.. Yaanyada cagaaran waxay gaari karaan caanaha oo dhan heerkulka qolka.
Kala duwan waa mid guud ahaan, yaanyada ku haboon saladhka, isticmaalka cusub, maraqa karinta, suxuunta dhinaca, casiirka. Ku habboon salping iyo pickling, aad u qurux badan ee isku darka khudradda. Miisaanka miisaanka waa 60-100 garaam.
Isbarbardhig miisaanka midhaha leh noocyo kaleba waxay ku jiri kartaa jadwalka hoose:
Shumacyada shumaca 60-100 garaam
Sensei 400 garaam
Tsar Bell illaa 800 garaam
Golden Flaming 85-100 garaam
Batyana 250-400 garaam
miraha dhadhan fiican leh iyo casiir leh oo qaab qurux badan leh;
ku haboon saladh iyo caano.
Xaqiiqdii ma jirto wax cillado ah. Dhibaatada kaliya ayaa ah baahida loo qabo in la sameeyo oo la xiro baadiyaha.
Hoos eeg hoosta: Tumboolada Mucjisooyinka Sawirrada
Tamaandho lagu beeray on geedo tobanka sano ee hore ee March. Ka hor inta beero, miraha waxaa lagula talinayaa in lagu qoynayo kororka koritaanka ilaa 12 saacadood.
Bedelkii daroogada warshadaha, waxaad isticmaali kartaa casiirka aloe cusub. Wixii geedo diyaarinaya ciidda nafaqada iftiinka, oo ka kooban beerta ama soday dhulka iyo humus jir. Bacriminta Potash, superphosphate iyo ash alwaax ah ayaa lagu dari karaa iskeelka, iyo sidoo kale qadar yar oo ciid ah.
Seeds lagu beeray qoto dheer oo 1.5-2 cm, rusheeyey top leh lakabka ah ee peat. Xayawaanka waxaa lagu buufiyaa biyo diirran oo la daboolay.
Heerkulka wanaagsan ee biqilka waa 25 darajo.. Ka dib markii uu soo baxay caleemaha, filimka laga saari karaa, iyo heerkulka qolka yar yar. Awoodaha leh geedo ayaa loo rogaa iftiin dhalaalaya - on daaqada qorraxda ama daaqadaha korontada.
In wajiga ah ee formation of 2 caleemo run, dhirta dhalinyarada ku quusin dheriyo gooni ah. Waraabinta waa mid dhexdhexaad ah, ka hor inta aadan ku tallaabin aqalka dhirta lagu koriyo, geedo waxaa lagu quudiyaa laba jeer oo leh xal dareere ah oo bacriminta macdanta ah.
Transplantation waxaa la fuliyaa horraantii Maajo, geedo yaryar ayaa xididada u fiicnaanaya oo aan xanuunsaneyn. Waxaa lagula taliyaa in lagu daadiyo ciidda iyadoo lagu xalinayo kaneecada ama kalluunka bakteeriyada. Qoryaha geedaha waxaa la dhigaa ceel kasta.
Waraabinta waa in aysan noqon mid aad u badan, yaanyada ma jecesho qoyaan fadhiya ee ciidda. Xilliga, waxaa lagu talinayaa 3-4 jeer si ay u quudiyaan ay duurka leh bacriminta macdanta adag oo leh faragelin ah ee potassium iyo fosfooraska.
Isla markiiba ka dib markii lagu tallaalay geedka lagu koriyo, dhirta waxaa la xirxiray taageerooyin xoog leh: trellis ama dhibco. Waxay u baahan tahay abuuritaanka baadiyaha ah 2-3aad afkoda leh ka saarista caleemaha hoose iyo caleemaha dhinaca dambe. Iyadoo koritaan xoog leh ayaa lagula talinayaa in la xoqdo barta kobaca.
Waxyaabaha kala duwan ee yaanyo Shumacyada Scarlet ma aha mid u nugul cudurada ugu weyn ee nightshade: blight, fusarium wilt, sulfur iyo kallana xidid.
Sida qiyaas ka hortag ah, ciidda si fiican u jeermis, iyo geedo waxaa lagu buufiyaa phytosporin ama diyaargarow kale oo aan sun aheyn.
Najiinka ciidda leh caws ama peat, iyo sidoo kale haraaga xilliyaysan waxay gacan ka geysan doontaa in ay burburiyaan cayayaanka.
Xayawaanka Colorado iyo slugs qashin ah ayaa lagu goostay gacmaha, sunta cayayaanka ayaa ka caawiya cayayaanka. Waxaad u isticmaali kartaa oo kaliya ka hor inta ubax. Inta lagu jiro xilliga jiilaalka, biyo-diyaarinta aan sunta aheyn waa mid la aqbali karo, iyo sidoo kale xal aqueous of ammonia.
Tamaandho Shumacyada Qaxwaha - quruxda dhabta ah ee lagu koriyo. Tamaandhada waxay ku adagtahay in ay daryeelaan, laakiin waxay si fiican uga jawaabaan xannaanada: heerkulka raaxada leh, waraabinta saxda ah iyo quudinta waqtigeeda.